Ny ady amin'ny alika dia alika ala izay nokarakaraina manokana mba handraisana anjara amin'ny fifaninanana mifanohitra. Na izany aza, tokony tokony hanavaka ny dikan'ny fehezan-teny hoe "alika mpiady" sy "alika mpiady" isika. Satria izy ireo dia tsy ateraky ny ady amin'ny alika, dia miforona izy ireo noho ny fampiofanana matanjaka. Voalohany, ity karazana biby fiompy ity dia naseho ho fampisehoana sy fampisehoana. Ankehitriny dia olona maro hafa avy amin'ny lisitry ny alika miady amin'ny fiompiana dia nanomboka nampiasaina ho firavaky ny anaram-pianakaviana iray na fianakaviana iray, izay tsy misy porofo mazava. Matetika, ny karazana sy ny zavatra rehetra ilain'ny biby dia tsy raisina an-tsoratra, izay mety ho vokany ratsy izany.
Matetika, avy amin'ny fampahalalam-baovao, maheno isika fa ireo alika mpiady tsara indrindra amin'ny alika dia tena lozabe sy tsy azo hifehezana amin'ny maha-izy azy. Ity dia angano madio. Raha toa ka mikolokolo tsara sy voakarakara tsara ilay biby, dia azo atao ny mampitombo fiarovana mahafehy tsara. Angamba ho gaga ianao, saingy araka ny fikambanana iraisam-pirenena malaza, vokatry ny fanadihadiana notontosaina tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2005, dia matetika no tratran'ny herisetra milamina toy ny poodle ny trangan-kolosaina manohitra ny tompony.
Ireto ambany ireto ny lisitr'ireo karazana amboa folo tsara indrindra.
Ny fihenan'ny alika hiadiana
Amin'ny toerana fahafolo amin'ny fiheverana ny lozan'ny alika dia ny Staffordshire Terrier . Ity dia karazana alika amerikana, izay miavaka amin'ny herim-po sy ny fahavononana. Tamin'ny voalohany, nasehon'izy ireo ny fanenjehana ny lalao goavana, izay nirohotra tamina vata lehibe. Tena tiany ny fianakaviany.
Pitbull . Ireo manam-pahaizana dia mihevitra ny omby omby ho biby miavaka. Raha ny marina dia tena sariaka izy ireo manoloana ny fianakaviana sy ny namany. Saingy amin'izao fotoana izao, dia tena ra mandriaka izy ireo amin'ny fanajana sy ny loza.
Ny isa manaraka amin'ny lisitr'ireo alika hiadiana alika dia Tosa Inu . Avy amin'ny Japoney izy ireo, mahery setra amin'ny fianakaviany. Aza manafika aloha.
Central Asian Shepherd (Alabai). Ny zokony tranainy indrindra. Nandritra ny taona maro, dia niaro ny fiompiana sy ny tranobem-barotra izy. Tena mafy sy tsy natahotra. Fantatra amin'ny ady ataon'izy ireo ao amin'ny CIS.
Ny isa enina amin'ny fiheverana ny alika hiadiana alika dia an'i Doberman . Tena tian'ny olona. Miaraka amin'ny fanampian'izy ireo dia mihatra amin'ny aretina ara-tsaina sy ara-pahasalamana izy ireo. Na dia eo aza ny loza, dia tsy misy dikany ny herim-batana sy ny lanjany ary ny haben'ny vatana.
Phil Breziliana (Filala Breziliana). Ao amin'ny lisitry ny alika hiadiana ny alika dia mandray ny toerana faha-5, mpihaza tsara. Raha jerena ny habe sy ny habetsa lehibe dia tsara ny mijanona ao amin'ny trano na trano fonenana iray.
Perro de pressa canario . Mpihaza mahafinaritra ho an'ny biby fiompy sy bibidia. Mamehy ny niharam-boina, tenda tenda. Tao amin'ny Nosy Canary indray mandeha dia nisy lalàna mandràra ny fananan-tany ho an'ny olona tsotra, fa ny mpihinana sy ny mpihaza fotsiny.
Rottweiler . Amin'ny tanana manjombona - ity karazana ity dia lasa fitaovam-piadiana. Ireo toetra tena manan-danja: hery, fanetren-tena, fikorontanan'ny mpihaza, mahery vaika. Ny manaikitra iray dia afaka manapaka ny karandohany.
Bull terrier . Ny fiomanana maharitra dia nanome ity karazana alika ity tsara indrindra amin'ny alika tsy mahazatra. Nandritra ny fotoana ela teo amin'ireo mpianatra sy ny mpampianatra tao Oxford dia heverina ho manan-danja ny manana namana tahaka ny efa-tongotra efatra. Izy dia 40% ny kitapo, izay ampiasainy tsara.
Ny toerana voalohany amin'ny fiheverana ny alika hiadiana alika dia ny kangal . Hardier sy matanjaka noho i Alabai. Ny habeny goavana dia mampivarahontsana ary mahatonga ny biby ho mpiambina tsara. Tsy mitaky amin'ny votoatiny.
Inona no karazana fanafody mahatsiravina azoko omena alika?
Ahoana no hanaovana saka sy alika?
Ahoana ny fahatsapan'ny alika?
Ragdoll saka hoditra - sombintsombin'ny biby tiany tsara
Tafio amin'ny alika iray ao amin'ny trano iray
Fanamboarana ny akquarium amin'ny tanany manokana
Ahoana ny famaritana ny firaisana ara-pananan'ny hamsters?
Nobivak amin'ny saka
Cystitis aorian'ny firaisana
Ireo endri-javatra manokana
Fikarakarana dalya amin'ny fararano
Fofom-bovoka tena tsara miaraka amin'ny lava maina
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C +
Ny papa Amy Winehouse dia mihevitra ny sarimihetsika momba ny tsy azo antoka
Ny gymnastique ho an'ny kibo sy ny waist
Ny vavaka amin'ny Cyprian sy Ustinje avy amin'ny filalaovana ody
Ahoana ny fomba hampiroboroboan'ny anthurium?
Joan Rowling ho an'ny fiantrana tsy tafiditra amin'ny lisitry ny milisy Forbes
Aiza no mandeha miasa?
Dazhdbog ao amin'ny Mythology Slavy - Faminaniana Vedika momba ny Fahatongavana ho Maty tany Dazhbog